သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ IPHONE တိုက်ဆိုင်ညှိယူဖို့ကိုဘယ်လို - IOS အတွက် - 2019
ဒါဟာအများအပြားစမတ်ဖုန်းလျင်မြန်စွာ discharge တစ်အလေ့အထရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုအတူငြင်းခုန်ရန်ခက်ခဲသည်။ အတော်များများကအသုံးပြုသူများသည်လွယ်ကူသောအသုံးပြုမှုအတွက်အလုံအလောက်ဘက်ထရီစွမ်းရည် devaysa ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါကြောင့်သူတို့က၎င်း၏စီးပွားရေးနည်းလမ်းများစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
သိသိသာသာမိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်အချိန်တိုးမြှင့်ဖို့နည်းလမ်းတွေ၏အတော်လေးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက်ကိုရှိပါသည်။ သူတို့တစ်ဦးစီ utility ကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီတာဝန်အတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
Method ကို 1: Power Saving Mode ကို Enable
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများအတွက်စွမ်းအင်ကယ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံးလမ်း - တစ်ဦးကိုအထူး power-saving mode ကိုအသုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာက Android operating system ကိုအတူနီးပါးမည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အကောင့်သို့ဤအင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသိသိသာသာ gadget ကများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အဖြစ်အချို့သောကန့်သတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလျော့ကျဆိုတဲ့အချက်ကိုယူသင့်ပါတယ်။
, ပါဝါချွေတာရေး mode ကိုကိုသက်ဝင်အောက်ပါ algorithm ကိုကပ်ရန်:
သွားပါ "Settings" ကို ဖုန်းနှင့်စာလိပ် "ဒီဘက်ထရီ".
ဒီနေရာတွင်တဲ့ Application တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုစာရင်းဇယားဖတ်နိုင်သည်။ သို့သွားရန် "Power Saving Mode ကို".
ပေးထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ် Check နှင့် mode ကိုရန် slider ကိုရွှေ့ "Enabled"။ သငျသညျ 15 ရာခိုင်နှုန်းတာဝန်ခံရောက်ရှိသည့်အခါဒီနေရာတွင်လည်းအလိုအလျောက်ပြောင်းခြင်း mode ကိုသက်ဝင်စေနိုင်ပါတယ်။
Method ကို 2: အကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင် settings ကို Set
သငျသညျဤအပိုင်းကနေကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ "ဒီဘက်ထရီ", ဘက်ထရီများ၏အမြောက်အများက၎င်း၏မျက်နှာပြင် expends, ဒါကြောင့်စနစ်တကျ configure လုပ်ဖို့အတော်လေးအရေးကြီးပါတယ်။
သို့သွားရန် "Screen" အဆိုပါ setup ကို device ကို။
ဒါဟာနှစ်ခု parameters တွေကိုချိန်ညှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ mode ကို Turn "အလိုက်"စိတ်မရှိကြအရောင်ပတ်လည်အလင်းရောင်မှ adjust, အခါဖြစ်နိုင်သောဘက်ထရီပါဝါ conserves ပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင်မှိန် hibernation ပါဝင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ပစ္စည်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "hibernate".
Method ကို 3: ရိုးရှင်းသောဝေါလ်ပေပါ Install
အမျိုးမျိုးသောကာတွန်းသုံးပြီးနောက်ခံပုံများ, နှင့်တူသောလည်းဘက်ထရီပါဝါစားသုံးမှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဒါဟာသင့်အိမ် screen ပေါ်မှာအရှိဆုံးရိုးရှင်းသောနောက်ခံပုံများတပ်ဆင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Method ကို 4: မလိုအပ်သောန်ဆောင်မှုကို Disable
ဒါကြောင့်လူသိများသည်နှင့်အမျှစမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ကြောင်းန်ဆောင်မှုများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကရောင်းချခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သူတို့ကအလေးအနက်ထားမိုဘိုင်း device ကိုပါဝါစားသုံးမှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဒါကြောင့်သင်အသုံးပြုကြဘူးအရာအားလုံးကိုကို turn off ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကဒါကြောင့်အပေါ်တည်နေရာန်ဆောင်မှုများ, Wi-Fi, ဒေတာဂီယာ, access point, Bluetooth နဲ့ပါဝင်နိုင်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်ထိပ်ရှပ်တာကိုဖုန်းကျဆင်းနေပေါ်တွင်နဲ့ off ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
Method ကို 5: applications များ၏အလိုအလျှောက်မွမ်းမံမှုများပိတ်မည်
လူသိများသည်နှင့်အမျှ Play စ Market ကအလိုအလျှောက်လျှောက်လွှာ updates များကိုထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ သငျသညျခန့်မှန်းစေခြင်းငှါ, ကြောင့်လည်းဘက်ထရီပေါ်ယိုစီးမှုသက်ရောက်သည်။ ထိုကြောင့်အဲဒါကိုပိတ်ထားစေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆုံး, အောက်ပါ algorithm ကို:
ပွင့်လင်း Play စ Market က App ကိုနှင့်စခရင်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း, sidebar မှာ၏အမည်စာရင်းတင်သွင်းများအတွက်ခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါ။
အောက်ကိုဆင်းနှင့်ကို select "Settings" ကို.
ကိုသွားပါ "Auto-update ကို apps များ"
box ကိုအပေါ် Check "ဘယ်တော့မှမ".
Read more: Android ပေါ်မှာ applications များ၏အလိုအလျှောက်မွမ်းမံကာကွယ်မည်
Method ကို 6: အပူအချက်များ၏ပပျောက်ရေးနေ့
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြည်နယ်ထဲမှာဘက်ထရီအားသွင်းပိုမိုလျင်မြန်စွာ ... စည်းကမ်းနှင့်အမျှသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအလွန်အကျွံအပူရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားပါ, စမတ်ဖုန်းကြောင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သုံးအပူသည်။ ဒါကြောင့်သူ့ကိုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးလပ်ချိန်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဒါ့အပြင် device ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မရသင့်ပါတယ်။
Method ကို 7: မလိုအပ်သောအကောင့်အသစ်များ၏ဖယ်ရှားရေး
သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းချိတ်ဆက်မဆိုအကောင့်ရှိပါကသင်အသုံးပြုကြပါဘူး, သူတို့ကို uninstall ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သူတို့ကအဆက်မပြတ်န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူညှိနေကြတယ်, ဒါကြောင့်လည်းအချို့သောစွမ်းအင်လိုအပ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ဒီ algorithm ကိုလိုကျနာ:
menu ကိုသွားပါ "Accounts ကို" မိုဘိုင်းကိရိယာ၏အပြင်အဆင်များ။
တစ်ဦးအပိုဆောင်းအကောင့်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ application တစ်ခု, ကိုရွေးပါ။
နှင့်ဆက်စပ်အကောင့်အသစ်များ၏စာရင်းဖြစ်သည်။ သင်ဖယ်ရှားသွားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့် Tapnite ။
ကို Select လုပ်ပါ "အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်".
ကိုလည်းကြည့်ပါ: သင်၏ Google အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်ကဘယ်လို
Method ကို 8: နောက်ခံအလုပ် applications များ
အင်တာနက်ကိုတွင်သင်သည်ဘက်ထရီပါဝါကိုချွေဖို့အားလုံးကို applications များပိတ်လိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဒဏ္ဍာရီရှိပါသည်။ သို့သော်ဤစကားမှန်သည်မဟုတ်။ ဒါဟာသင်ပိုမိုပွင့်လင်းပါလိမ့်မည်သော applications များပိတ်ဖို့ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အမှန်မှာသူတို့ခြစ်ရာကနေစဉ်ဆက်မပြတ် run မယ်ဆိုရင်အဖြစ်အေးစက်နေတဲ့ပြည်နယ်အတွက်, သူတို့သလောက်စွမ်းအင်လောင်ကြဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့်ပိုကောင်းသူတို့သည်အနီးအနာဂတျမှာသုံးစွဲဖို့စီစဉ်မ applications များနှင့်အခါအားလျော်စွာဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုခံရမယ့်လျက်ရှိသောသူတို့ကိုပိတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် - လျော့ချသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့။
Method ကို 9: အထူး Applications ကို
သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာဘက်ထရီသက်တမ်းထိန်းသိမ်းရန်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအများအပြားအထူးအစီအစဉ်များရှိပါသည်။ သူတို့အထဲမှတစ်ဦးသင့်ဖုန်းများ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုပိုကောင်းအောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်နှင့်အတူ du ဘက်ထရီချွေတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးခလုတ်ကို၏ click နှိပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
du ဘက်ထရီ Saver Download
Download များနှင့်ဖွင့်လှစ် app ကိုပြုလုပ်ဖြန့်ချိ, ကိုနှိပ်ပါ "Start" ပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
main menu ကိုပုံပေါ်အလိုအလျောက်သင့် system ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဆုံးမ".
သငျသညျအကြိုးရလဒျမြင်ရပါလိမ့်မည်သည့်ပြီးနောက်ကိရိယာ၏ optimization ၏လုပ်ငန်းစဉ်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနောက်တဖန်မ 1-2 ထက်မိနစ်ကြာပါတယ်။
ထိုအပလီကေးရှင်းအချို့ကိုသာပါဝါကိုချွေတာ၏ထင်ယောင်ထင်မှားဖန်တီး, တကယ်တော့ကြောင့်မလုပ်ကြပါဘူးသတိပြုပါ။ ဒါကြောင့် developer များထဲကတစ်ခုအားဖြင့်လှည့်ဖြားခံရဖို့မသကဲ့သို့, ပိုပြီးဂရုတစိုက်ရွေးချယ်အခြားအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးကြိုးစားပါ။
ဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြံပြုချက်များပြီးနောက်သင်သည်သူတို့၏စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲဖို့အများကြီးပိုရှည်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှအလုပ်မလုပ်မပါဘူးဆိုရင်, အရှိဆုံးဖွယ်ရှိဖြစ်ကောင်းဘက်ထရီသူ့ဟာသူအတွက်အမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။ သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအားသွင်းပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ခရီးဆောင် charger ကိုမဝယ်နိုင်ပါ။